Daawo Sawirada : Masjid aad u Qurux badan oo laga dhisay Wadan aan markii hore Muslimiinta laga jecleyn !! | Balanbaalis.Com	Daawo Sawirada : Masjid aad u Qurux badan oo laga dhisay Wadan aan markii hore Muslimiinta laga jecleyn !! – Balanbaalis.Com
Daawo Sawirada : Masjid aad u Qurux badan oo laga dhisay Wadan aan markii hore Muslimiinta laga jecleyn !!
Jul 1, 2016 - jawaab
Mid ka mid ah dalalka Yurub oo xiliyadii hore aanan laga jeclaan jirin dadka Muslimiinta ah ayaa waxaa iminka laga dhisay Masjid aad u qurux badan kaas oo soo jiitay indhaha Dunida Islaamka .
Masjidkaan oo laga dhisay magaalo xeebeedka loo soo Dalxiis tago ee Rijeka ayaa waxaa loogu magac daray (Rijeka Islamski Centar) wuxuuna ku yaalaa dalka Croatia oo xilyadii hore aanan laga jeclaan jirin dadka Muslimiinta ah .
Shacabka ku nool dalka Croatia ayaa waxa ay u badan yihiin kuwo Masiixiyiin ah waxeeyna sagaashameeyadii dagaalo kulul la soo galeen Muslimiinta Bosnia in kasto hada si aad ah loo soo dhaweeyay Masjidkaan cusub ee laga hir galiyay magaalo xeebeedka loo soo Dalxiis tago ee Rijeka .